Ciidanka Puntland oo Baadi Goobaya maleeshiyaad rabshado wada - Awdinle Online
Ciidanka Puntland oo Baadi Goobaya maleeshiyaad rabshado wada
Dagaal u dhexeeyay Ciidamo ka tirsan Madaxtooyada, kuwa PMPF ee Puntland iyo rag hubeysan oo maleeshiyaad ah ayaa waxaa uu saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay halka bariga Gobolka Gardafuu ee Puntland.
Taliska Ciidanka PMPF ee Puntland ayaa sheegay inay weerar ku qaadeen fariisimo ay lahaayeen maleeshiyaad beeleed hubeysan oo kala go’doomiyay isku socodka deegaano ka tirsan Gardafuu, sidaasina ay weerarka ugu qaadeen.
Dagaalka u dhexeeyay dhinacyada ayaa sigaar ah uga dhacay halka loo yaqaano dalcada Lafagoraay oo muddo dhowr cehso u xirneyd Maleeshiyaadka, in kastoo aan la shaacin khasaaraha ka dhashay dagaalkaas oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan.
Taliska Ciidanka PMPF oo Qoraal soo saaray ayaa waxaa ay ku sheegeen inay maleeshiyaadka ka qabsadeen saanad hub ah iyo gaari sahad u siday, isla markaana ay kala carareen, balse ay ku raad-joogaan, gacantana ay ku soo dhici doonaan.
Ciidamada ayaa sidoo kale furay waddooyin ay go’ddoomiyeen maleeshiyaadkii hubeysnaa, isla markaana ay wadaan howlgal lagu raadinayo raggaas oo u abaabulnaa hab beeleed, waxaana horey Gobolka Gardafuu uga dhacay dagaal kala duwan.
Previous articleMidowga Musharixiinta” Madaxweyne hore Farmaajo waa dambiile Qaran”
Next articleIGAD oo War ka soo saartay Iska horimaayadii ka dhacay Muqdisho